12 Katidral kacha adọrọ mmasị na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > 12 Katidral kacha adọrọ mmasị na Europe
Ndị mmụọ ozi, ọhụrụ, windo na-enwu gbaa nke nwere iko, bụ ole na ole n'ime ihe ndị dị na 12 Katidral kacha adọrọ mmasị na Europe. Katidral ọ bụla toro ogologo, ibu, na -adọrọ adọrọ karịa nke ọzọ, nke ọ bụla na -egosi ihe ndị ọzọ.
1. Katidral Duomo, Milan
Milan na -adọta ọtụtụ nde ndị njem nleta kwa afọ. Katidral Milan, Katidral Milan bụ otu akara ga -eju gị anya site na nlele mbụ. Ọ were 600 afọ iji wuo nnukwu katidral na Italy, mara mma, keugwu, ma dị egwu na marble pink na -acha odo odo.
Window iko nwere ude, gothic ọcha, na ihe oyiyi ọla edo Madonnina dị n'elu bụ naanị ihe ole na ole ga -amasị gị. Ya mere, ma ọ bụrụ na ịchọrọ n'ezie ịmasị katidral Milan na -adọrọ mmasị, mgbe ahụ ị nwere ike ịga ije n'elu ụlọ. Ya mere, Katidral Milan bụ naanị katidral n'ụwa, ebe ị nwere ike ịga ije n’elu ụlọ.
2. Katidral Sagrada Familia, Barcelona
Naanị katidral ka na -aga n'ihu kemgbe 1882, Katidral Sagrada Familia nke Gaudi, bụ ọrụ nka. Katidral Sagrada bụ ngwakọta nke Spanish Gothic Late, Ụlọ nke Art Nouveau, na Catalan Modernism ije. Nhazi Gaudi bụ nke 18 spiers, na -anọchite anya 12 ndi ozi, Nwa agbọghọ na -amaghị nwoke, ndị nkwusa ozioma anọ, na Jizọs Kraịst kachasị elu.
Na mgbakwunye, nke ọ bụla n'ime ụzọ ihu atọ ahụ nwere mpụga dị iche kpamkpam: facade nke Passion, Ebube, na Ọmụmụ Ihe Ọmụmụ. Ya mere, na ọtụtụ ihe ịhụ ma chọpụta, mee atụmatụ njem gị na Barcelona nke ọma, ka ị ghara ileghara katidral a dị ịtụnanya anya.
3. Katidral kacha adọrọ mmasị na Europe: Katidral Kolner, Cologne
Ewubere n'elu 7 ọtụtụ narị afọ, Cologne Katidral bụ ihe nnọchianya na -akpali akpali nke ụkpụrụ ụlọ Gothic. Ọzọkwa, Katidral Cologne bụ oche Achịbishọp nke Cologne na ụlọ ụka mmiri kachasị ogologo na Europe niile.
na-akpali mmasị, Ọmarịcha ala a bụbu ebe anụ ụlọ na ahịhịa ahịhịa n'oge mgbanwe ọchịchị France. taa, ị gaghị ahụ ihe nrụpụta nke ọkwa a na akụkọ katidral. Ime ụlọ ahụ mara mma nke ukwuu dị ka mputa nwere windo enyo enyo na akụ. Kolner Dom na -enye ọmarịcha abalị na ọkụ anyanwụ dara.
Berlin na Aachen Na A Train
Frankfurt na ụgbọ oloko na Cologne
Dresden gaa Cologne Na ụgbọ oloko
Aachen gaa Cologne na ụgbọ oloko
4. Basilica nke Santa Maria Del Fiore, Florence
Pink, obere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, na ọcha marble facade, mosaic ala n'ime, Basilica di Santa Maria na Florence bụ katidral nrụzigharị dị ịrịba ama. Ọzọkwa, Frescos nke Giorgio Vasari nke Ikpe Ọgwụgwụ n'uko ka ndị hụrụ nka ga -agbaghara.
Katidral Florence karịrị akara ala. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị naghị enwe mmasị na nka, katidral a ga -amasị gị ma mee ka ị na -enwe mmasị n'ihe osise dị egwu ruo ọtụtụ awa. Ọ bụrụ na ịchọrọ ikuku ikuku, wee rịgoro na Brunelleschi Cupola maka nlele nke Florence anwansi.
Rimini na ụgbọ oloko na Florence
Rome jiri ụgbọ oloko gaa Florence
Jiri ụgbọ oloko jiri Pisa gaa Florence
Venice jiri ụgbọ oloko gaa Florence
5. Katidral kacha adọrọ mmasị na Europe: CharleKatidral, Vienna
Akara nke Vienna, St. Katidral Charles dị ịtụnanya na ihu ọcha na ụlọ ọkụ na -acha akwụkwọ ndụ. Ezubere n'ụdị Baroque, St. Katidral Charles na -amasị ndị ọbịa kemgbe 19nke na narị afọ. E mere katidral ahụ iji sọpụrụ onye nlekọta nchekwa Charles Borromeo, onye nri, na onye ozi nke nhụjuanya na ihe otiti Europe na 16nke na narị afọ.
Otú ọ dị, ihe kacha adọrọ mmasị nke St.. Charles Basilica bụ 1250 square frescos nke square na copula. N'adịghị ka katidral ndị ọzọ dị na Europe, ebe a ị nwere ike were igwe elele panoramic iji nwee mmasị na frescos dị nso. Ya mere, ikwubi, St. Charles katidral dị na Vienna agaghị echefu gị ezumike ezumike obodo na Europe.
6. Katidral Le Mans, France
A raara nye Saint Julian, bishọp mbụ nke Le Mans, Katidral Le Mans, bụ ngwakọta ọmarịcha ụkpụrụ ụlọ nke ụdị Gothic French na Romanesque nave. Otu njiri mara mma nke ga -adọrọ uche gị bụ buttresses na -akwado mpụga n'ụdị ọmarịcha. N'ihi ya facade nke katidral Le Mans bụ otu n'ime ihe mara mma na Europe.
Ọzọkwa, iko nwere ntụpọ na ndị mmụọ ozi e sere n'elu katidral na -agbakwunye na Le Mans’ Ọmarịcha ihe owuwu ụlọ wee hapụ gị ọtụtụ akụ ga-achọpụta n'ime katidral a dị afọ 500.
7. Katidral kacha adọrọ mmasị na Europe: St. Paul Katidral, London
Ọ na -achịkwa mbara igwe London, ma n'elu, Katidral nke Saint Paul abụghị otu n'ime akara ngosi dị egwu. Ịma mma nke St.. Katidral Paul ga -ekpughe onwe ya ma ọ bụrụ na ị wepụta oge banye. mgbe, ọ ga -eju gị anya na ịre ihe ndozi ọcha na oji. Ọzọkwa, ụlọ katidral karịa 300 ihe ncheta ndị kacha mma na Britain, dị ka Wren n'onwe ya rụrụ nnukwu katidral.
Otú ọ dị, otu n'ime ihe na -adọrọ mmasị na St.. Katidral Paul bụ ebe a na -eme mkpọtụ. Ee, ma ọ bụrụ na ị na -agba izu n'otu akụkụ nke ebe a na -ese ihe, mgbidi ga -eburu ya na nsọtụ ọzọ.
8. Katidral Berlin
N'agbanyeghị na ọ nwere nnukwu mmebi na WWII, Katidral Berlin bụ katidral mara mma nke nwere isi iyi na ahịhịa ndụ n'ihu. E wuru katidral Berlin dị ka akụkụ nke obí obodo Berlin, mana onye na -atụpụta ụkpụrụ ụlọ Julius Carl Raschdorff gbanwere ya ka ọ gosipụta ebube na ịdị ukwuu nke St.. Katidral Paul na London. Naanị n'ime 1993, mweghachi ahụ agwụla, mgbe ọdịda nke nnukwu mgbidi Berlin kwụsịrị.
Ihe kacha adọrọ mmasị na Katidral Berlin bụ frescos, ihe ịchọ mma ọlaedo, na ihe akpụrụ akpụ. Na mgbakwunye, akụkụ Saucer nwere egwu ihunanya na nke na-agbaze obi bụ akụkụ ịhụnanya na nke ikpeazụ na Germany bara uru ịrara oge ịnọdụ ala na ịdepụta naanị. N'ihi ya, gbagoo na ebe nlele maka nlele obodo Berlin iji mezue njem gị n'otu n'ime 12 Katidral kacha adọrọ mmasị na Europe.
9. Katidral kacha adọrọ mmasị na Europe: Senti Katidral Basil, Moscow
One of ebe kachasị adọrọ mmasị ileta na Russia Ọ bụ katidral Saint Basil dị na Moscow. Ị gaghị agbaghara katidral a dị ịtụnanya ị ga -ahụ ya site na ebe ọ bụla na Red Square na karịa. Ka ị na -abịaru nso, otu ụlọ ụka etiti na ụka itoolu ndị ọzọ gbara ya gburugburu.
Ihe kacha adọrọ mmasị bụ na ụlọ nsọ ndị a jikọtara ya na amaokwu pụrụ iche. Ivan the Terrible bụ onye mere katidral Saint Basil, na nnukwu ụlọ dị iche iche bụ ihe omimi ruo taa. Ọ bụ ezie na ụdị nhazi a pụtara na narị afọ nke 17, mana amachaghị agba agba.
10. Katidral Notre Dame, Paris
The gargoyles bilie na-enyo-enyo windo bụ 2 nke atụmatụ ga -adọta gị dịka nde mmadụ ndị ọzọ ga -abịa na katidral Notre Dame dị na Paris. Ọmarịcha na mpụga, ma mara mma n'ime, Akụ katidral ga -ebuli gị karịa obodo kacha nwee ịhụnanya na ụwa, maka panoramic echiche.
Nwanyị nwanyị anyị guzoro na Ile de la Cite ma raara onwe ya nye Virgin na -agọzi. Na mgbakwunye, katidral ahụ bụ saịtị maka nnukwu ihe omume dị ka nchikota nke Napoleon Bonaparte, na iti Joan nke Arc. N'ihi ya, anya gị ga -amasị ịma mma nke owuwu katidral, ntị gị na -amasịkwa akụkọ ebube.
11. Katidral kacha adọrọ mmasị na Europe: Basilica nke Saint Mark, Venice
Ọ bụ otu n'ime basilicas kachasị mma na Europe, mana ọ bụ ihe nzuzo zoro ezo nke ụlọ Saint Mark's Basilica, na -eme ya katidral kacha adọrọ mmasị na Europe. Dị ka akụkọ mgbe ochie si kwuo, E wuru Basilica Saint Mark ka ọ nọrọ n'ụlọ ihe ncheta nke Mark onye nkwusa ozioma, otu n'ime ndị ozi anọ, mgbe ndị ohi zukọrọ n'Ijipt. Akụkọ a na -egosi nke 13 mosaic nke narị afọ, n'elu ọnụ ụzọ aka ekpe ka ị na -abanye na basilica.
Ọzọkwa, Basilica Saint Mark nwere akụ dị oke ọnụ ahịa karịa ọla edo nke Royal Royal - Pala dOro. Pala bụ mgbanwe Byzantian, studded na ihe karịrị 2000 nkume dị egwu. ikwubi, ọ bụrụ na ị na -eme atụmatụ ileta otu akara ngosi na Venice, Basilica Saint Mark bụ otu, maka ịmata ihe, ndị njem mara mma na akụkọ ihe mere eme.
12. St. Katidral Vitus, Prague
Gafee osimiri, na àkwà mmiri, na Prague Castle, you will be enchanted by Saint Vitus cathedral. It took close to 6 ọtụtụ narị afọ iji wuchaa katidral gothic, na akara ngosi dị ịrịba ama na Prague. Ogologo oge o were wuo Katidral Saint Vitus ka egosiri na ngwakọ ụdịdị.
Katidral Saint Vitus nwere Renaissance, Gothic, na ihe ndị Baroque: dị ka spire nke ụlọ elu ndịda na nnukwu akụkụ na mpaghara ugwu. Window nwere enyo nwere agba bụ ihe dị ịtụnanya na katidral ọ bụla na St.. Windo Vitus adabaghị na ịma mma site na katidral ndị ọzọ na -adọrọ mmasị na Europe.
Wga -enwe obi ụtọ inyere gị aka ịhazi njem agaghị echefu echefu na ndị a 12 adọrọ mmasị katidral na Europe ụgbọ okporo ígwè, Banye ụwa nke Save A Train.
You chọrọ Embed anyị blog post “ 12 Kasị Katidral Kasị Mma Na Europe ”na saịtị gị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fig%2Fmost-fascinating-cathedrals-europe%2F - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Beautifulcathedralseurope Katidral Duomo famouscathedralsineurope FascinatingCathedrals